लण्डनबाट फर्किएपछि किन डराइन् रेजिना ?
काठमाडौं । नायिकाबाट निर्मात्री बनेकी रेजिना उप्रेती युरोप उड्दा कतिपयले उनलाई उतै भासिने अनुमान गरेका थिए । कविता श्रेष्ठसँग मिलेर सहनिर्मात्री बनेकी रेजिना स्वदेश त फर्किइन् । तर मनभरी डर पालेर । आखिर किन डराइन्, रेजिना ?
झण्डै एक वर्षअघि लामो युरोप यात्रामा निस्कँदा उनी 'होमसिक' भएर विदेशी भूमिमै डराएकी थिइन् । यसपाली लण्डन जाँदा उतै बस्ने प्रेमीको साथ पाएकोले त्यस्तो अवस्था बेहोर्नुपरेन, रेजिनालाई । लण्डनको उनको बसाइ संभवतः अविष्मरणीय भएको हुनुपर्छ ।
तर रेजिना काठमाडौं आर्लनासाथै छट्पटाउन थालेकी छिन् । एनआरएन प्रेमीलाई सम्भिmएर होइन, पहिलोपटक लगानी गरेको सिनमो 'वरदान'को व्यापार कस्तो होला भनेर उनी पिरोलिएकी हुन् । 'प्रदर्शन मिति नजिकिएपछि डर पनि बढ्दैछ,' उनले भनिन् । २५ फागुनबाट 'बरदान' प्रदर्शनमा आउदैछ ।
'वरदान'कै प्रचारप्रसारका लागि उनी लण्डन गएको बताएकी थिइन् । राजेश हमाल, करिष्मा मानन्धर, रेजिन उप्रेतीको अभिनय छ, सिनेमामा । निर्देशक शोभित बस्नेतसँग भने सहनिर्मात्री कविताको मनमुटाब कायम छ । त्यसैले पनि रेजिनालाई झनै चिन्ता बढेको हुनसक्छ । यद्यपि हमाल र मानन्धरले शोभित र कवितालाई मिलाउने जमर्को नगरेका भने होइनन् । होइन रेजिनाको डरलाई रोक्न पनि अब निर्देशक र सहनिर्माताको मेल हुनैपर्ने हो कि ?